“ဘာကြောင့်”က ဒီလောက်တောင် အရေးပါခဲ့သလား?? - Tameelay
“ဘာကြောင့်”က ဒီလောက်တောင် အရေးပါခဲ့သလား??
(၁) တချို့က လှပတဲ့ ရှုခင်းကို မမြင်ရဘူး။ တချို့က အသံကို မကြားရဘူး။ တချို့က သီချင်းဆိုမရဘူး
ဖွင့်ပြောလို့မရဘူး။ တချို့က ပန်းရနံ့ကို မရူရိူက်နိုင်ဘူး။ တချို့က ပြေးလွှားဆော့ကစားလို့ မရဘူး။
တချို့က ဖိနပ်စီးဖို့ ခြေထောက်မရှိဘူး။ ဒါနဲ့များ ဘာဖြစ်လို့ တိမ်အမြင့်ပေါ် ငှက်တစ်ကောင်လို ငါ
(၂) လူတစ်ယောက်မှာ ပါးစပ်ပေါက် တစ်ပေါက်ပဲပါတယ်။ ဒါနဲ့များ
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်များတဲ့ ပုံစံမတူ ကော်ဖီခွက်ကို လိုနေကြတာလဲ…
(၃) ကမ္ဘာမှာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်များတဲ့ စစ်ပွဲတွေရှိရတာလဲ၊
ဘာဖြစ်လို့ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြရတာလဲ၊ တီဗွီမှာ ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့
ရုပ်ပုံကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ လွှင့်နေရတာလဲ၊ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကာကွယ်ဖို့
လူတွေမေ့နေခဲ့ကြပြီလား၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်မှာစိုးလို့ အိပ်ရမှာကိုကြောက်ခဲ့ပေမယ့်
အိပ်မက်ထဲမှာပဲ လိုချင်တဲ့ လှပငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာကို ငါတွေ့နိုင်ခဲ့တယ်။
(၄) ဘာဖြစ်လို့ အစက လက်ထပ်ခဲ့ရတာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ ခုချိန်မှာ ကွာရှင်းရတာလဲ၊
ဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်း အစကကြိုသိခဲ့ရင် အမေတို့ လက်ထပ်ခဲ့ဦးမလား၊ လမ်းခွဲမယ်လို့
အစကကြိုသိခဲ့ရင် ကျွန်မကိုမွေးခဲ့ကြဦးမလား၊ သက်ဆုံးထိတိုင် ကျွန်မဝမ်းနည်းမှာကို
ဂရုစိုက်မိမလား၊ သက်ဆုံးထိတိုင် ကျွန်မဝမ်းနည်းမယ်ဆိုရင် အမေတို့ပြန်ကြင်နာကြမလား၊
ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မရဲ့မျက်ရည်တွေက ရုပ်ရှင်ရုံအမှောင်ထဲရောက်မှ စီးကျရတာလဲ။
(၅) နေရောင်နောက်မှာ အရိပ်ပုန်းနေတယ် ပျော်ရွှင်ခြင်းနောက်မှာ ဝမ်းနည်းခြင်းပုန်းနေတယ်
မာန်တက်ခြင်းနောက်မှာ ယုတ်ညံ့ခြင်းတွေပုန်းနေတယ် တိမ်မည်းရဲ့နောက်မှာ လမင်းပုန်းနေတယ်
ဒီလိုဆိုရင် “နောက်ကျော” က ဘယ်သူ့နောက်မှာ သွားပုန်းနေရမလဲ..
(၆) ငါ နင့်ကိုချစ်တယ် ငါ နင့်ကိုမချစ်ဘူး ငါ နင့်ကိုချစ်တယ် ငါ နင့်ကိုမချစ်ဘူး ငါ နင့်ကိုချစ်တယ်
ငါ နင့်ကိုမချစ်ဘူး ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်လောကထဲမှာ ဘာဖြစ်လို့ ပျင်းရိဖို့ကောင်းလောက်တဲ့ ဒီအဖြေနှစ်ခုပဲ ရှိခဲ့တာလဲ…
(၇) မုသားတစ်ခုပြောရင် နောက်မုသားတစ်ခု ထပ်ပြောရတယ် ဆက်ပြီး နောက်(၃)ခု
ထပ်ပြောရတယ် နောက်ဆုံး မရပ်မနား ဆက်ပြောသွားဖို့ရှိတယ်။ ဘာအတွက်ကြောင့်လဲ…
မူရင်းရေးသားသူ; ထိုင်ဝမ်စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ Jummy (幾米)
(Friday, September 16, 2011)
(၁) တခြို့က လှပတဲ့ ရှုခငျးကို မမွငျရဘူး။ တခြို့က အသံကို မကွားရဘူး။ တခြို့က သီခငျြးဆိုမရဘူး
ဖှငျ့ပွောလို့မရဘူး။ တခြို့က ပနျးရနံ့ကို မရူရိူကျနိုငျဘူး။ တခြို့က ပွေးလှားဆော့ကစားလို့ မရဘူး။
တခြို့က ဖိနပျစီးဖို့ ခွထေောကျမရှိဘူး။ ဒါနဲ့မြား ဘာဖွဈလို့ တိမျအမွငျ့ပျေါ ငှကျတဈကောငျလို ငါ
(၂) လူတဈယောကျမှာ ပါးစပျပေါကျ တဈပေါကျပဲပါတယျ။ ဒါနဲ့မြား
ဘာဖွဈလို့ ဒီလောကျမြားတဲ့ ပုံစံမတူ ကျောဖီခှကျကို လိုနကွေတာလဲ…
(၃) ကမ်ဘာမှာ ဘာဖွဈလို့ ဒီလောကျမြားတဲ့ စဈပှဲတှရှေိရတာလဲ၊
ဘာဖွဈလို့ အခငျြးခငျြး သတျဖွတျကွရတာလဲ၊ တီဗှီမှာ ဘာဖွဈလို့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့
ရုပျပုံကိုပဲ ထပျတလဲလဲ လှငျ့နရေတာလဲ၊ ကလေးငယျရဲ့ ဖွူစငျတဲ့ စိတျဝိညာဉျကိုကာကှယျဖို့
လူတှမေနေ့ခေဲ့ကွပွီလား၊ အိပျမကျဆိုးတှေ မကျမှာစိုးလို့ အိပျရမှာကိုကွောကျခဲ့ပမေယျ့
အိပျမကျထဲမှာပဲ လိုခငျြတဲ့ လှပငွိမျးခမျြးတဲ့ကမ်ဘာကို ငါတှနေို့ငျခဲ့တယျ။
(၄) ဘာဖွဈလို့ အစက လကျထပျခဲ့ရတာလဲ၊ ဘာဖွဈလို့ ခုခြိနျမှာ ကှာရှငျးရတာလဲ၊
ဒီလိုဖွဈမယျမှနျး အစကကွိုသိခဲ့ရငျ အမတေို့ လကျထပျခဲ့ဦးမလား၊ လမျးခှဲမယျလို့
အစကကွိုသိခဲ့ရငျ ကြှနျမကိုမှေးခဲ့ကွဦးမလား၊ သကျဆုံးထိတိုငျ ကြှနျမဝမျးနညျးမှာကို
ဂရုစိုကျမိမလား၊ သကျဆုံးထိတိုငျ ကြှနျမဝမျးနညျးမယျဆိုရငျ အမတေို့ပွနျကွငျနာကွမလား၊
ဘာဖွဈလို့ ကြှနျမရဲ့မကျြရညျတှကေ ရုပျရှငျရုံအမှောငျထဲရောကျမှ စီးကရြတာလဲ။
(၅) နရေောငျနောကျမှာ အရိပျပုနျးနတေယျ ပြျောရှငျခွငျးနောကျမှာ ဝမျးနညျးခွငျးပုနျးနတေယျ
မာနျတကျခွငျးနောကျမှာ ယုတျညံ့ခွငျးတှပေုနျးနတေယျ တိမျမညျးရဲ့နောကျမှာ လမငျးပုနျးနတေယျ
ဒီလိုဆိုရငျ “နောကျကြော” က ဘယျသူ့နောကျမှာ သှားပုနျးနရေမလဲ..
(၆) ငါ နငျ့ကိုခဈြတယျ ငါ နငျ့ကိုမခဈြဘူး ငါ နငျ့ကိုခဈြတယျ ငါ နငျ့ကိုမခဈြဘူး ငါ နငျ့ကိုခဈြတယျ
ငါ နငျ့ကိုမခဈြဘူး ရှုပျထှေးတဲ့ အခဈြလောကထဲမှာ ဘာဖွဈလို့ ပငျြးရိဖို့ကောငျးလောကျတဲ့ ဒီအဖွနှေဈခုပဲ ရှိခဲ့တာလဲ…
(၇) မုသားတဈခုပွောရငျ နောကျမုသားတဈခု ထပျပွောရတယျ ဆကျပွီး နောကျ(၃)ခု
ထပျပွောရတယျ နောကျဆုံး မရပျမနား ဆကျပွောသှားဖို့ရှိတယျ။ ဘာအတှကျကွောငျ့လဲ…
မူရငျးရေးသားသူ; ထိုငျဝမျစာရေးဆရာ၊ ပနျးခြီဆရာ Jummy (幾米)
အကိုတယောက်၏ ဆုံးမစာ ရွာတရွာတွင်…… မိဘနှစ်ပါးတွင် သားတယောက် သမီးတယောက်ရှိသည် သားက အကြီး သမီးက အငယ်ဖြစ်သည်….. တနေ့ကြတော့…… အပျိုလေးဖြစ်လာသော ညီမလေးက အကိုမေးပါသည်…. အကို ညီမလေး ၀တ်ထားတာလှလား…??? အကိုဖြစ်သူက….. ညီမလေးဝတ်တာ အရမ်းလှပါ့ဗျာ ညီမလေးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံးပါ…. ညီမလေး …
မာနကြီးတဲ့မိန်းမတဲ့လား လောကကြီးထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပေးဆပ်ရတာများပါတယ် ။ ဒီလိုအခက်ခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ မာနဆို တာ မဖြစ်မနေမို့ ထားခဲ့ရပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘဝမှာ လိုချင်တာကို စိတ်ကူးနဲ့ တင်ကျေနပ်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး အရိုးသားဆုံးနည်းနဲ့မရရအောင်ယူခဲ့တယ် ။ …
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်မှု စတဲ့အရည်အချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့အိမ်ထောင်သည်တိုင်း များသောအားဖြင့် တည်မြဲကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို Trend MyanmarMyanmar Magazine. Pageမှာဒီလိုလေးဖော်ပြထားတာဖတ်မိလိုက်တယ်။ ကိုယ်နဲ့တူတာလေးတွေရွေးကြည့်ကြရအောင် ၁။ အိပ်ယာအတူဝင်တတ်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်သည်တွေဟာ ယူပြီးစအချိန်ကာလတွေမှာသာ အိပ်ယာအတူဝင်တတ်ကြတာပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်နှစ်လောက်ဆို တစ်ယောက်က အရင်အိပ်နှင့်တယ်။ …